Muxuu Apple Watch Series 3 oo leh LTE dhab ahaantii noo keenayaa? | Wararka IPhone
Muxuu Apple Watch Series 3 oo leh LTE dhab ahaantii noo keenayaa?
Ciise gooyaa | | Apple Watch
Bixitaanka cusub Apple Watch Taxanaha 3 Waxay isbeddel ku sameysay suuqa Watch, iyaga oo ka dhigaya kuwo ka madax bannaan iPhone-ka. Qaabkan cusub waxay kujirtaa LTE Laakiin run ahaantii ma ognahay waxa aan ka faa'iideysanno tikniyoolajiyaddan cusub? Waxaa jira shakiyo dhowr ah oo aan dhalinayno markaan kahadalno horusocodkan cusub iyo farqiga udhaxeeya "walaalkiis" LTE la'aantiisa.
Ma jiro oo kaliya farqiga dhaqaale, taas oo ah mid iska cad, laakiin waxaan sidoo kale diirada saari doonnaa inaan si faahfaahsan u falanqeyno dhinacyo kaa caawin doona haddii aad rabto inaad ku iibsato sheygan LTE ama la'aanteed.
1 Apple Watch Taxanaha 3 oo leh LTE
2 Isbarbardhiga LTE iyo la'aantiis
3 Dhinacyada wanaagsan ee tusaalaha leh LTE
4 Dhinacyada xun ee haysashada LTE
Apple Watch Taxanaha 3 oo leh LTE
Jeff Williams wuxuu na baray moodel cusub Apple Watch, oo boos celintoodu bilaabatay Sebtember 15, oo leh warka weyn ee aan horay u soo sheegnay ee ku saabsan ku darista LTE. Waa run oo tani ma aha oo kaliya cusbooneysiinta ay ku soo bandhigeyso qaabkeedii hore, ee lagala baxay dukaanka rasmiga ah ee Apple. Maqaalkan waxaan diiradda saari doonnaa qaabka leh LTE si aan wax uga ogaano wax walba oo ku saabsan.
Jaleecada hore, Apple Watch Series 3 cusub wuxuu soo bandhigayaa nashaad ahaan ficil ahaan la mid ah qaabkii hore marka laga reebo giraangirta midigta ku taal oo midab casaan ku leh bartamaha.
Sida iska cad, dhexdeeda waa halka ay ku soo bandhigeyso kala duwanaansho weyn oo, sidaan horeyba ugu sharaxnay qodobka soo socda ee ku saabsan qaabkan cusub, waxay ka dhigeysaa horumar weyn Apple.
Isbarbardhiga LTE iyo la'aantiis
Haddii aan isbarbardhigno labada nooc ee Apple Watch Series 3, (oo leh LTE iyo la'aanteed) waxaan dhawaan ku dhammayn doonnaa falanqaynta. Farqiga kaliya in ay soo bandhigaan waa iyaga kaydinta awoodda. Tani waxay leedahay 8GB qaabka aan lahayn LTE halka nooca leh LTE, wuxuu noqon lahaa 16GB kaydinta gudaha ah.
Inta kale ee qeexitaannada gudaha waa dhab ahaan isku mid labada moodelba. Kuwani, waxaad ku dhex arki kartaa iyaga Websaydhka Apple. Sidaa darteed, si loo ogaado kala duwanaanshaha iyo waxa hal nooc uu na siinayo iyo mid kale, waa inaan falanqeyno hawlgalkooda.
Dhinacyada wanaagsan ee tusaalaha leh LTE
Marka hore, iyo tan ugu cad, waa suurtagalnimada in la waco laga bilaabo saacaddeenna iyada oo aan haysan iPhone-ka meel u dhow. Kaliya adoo haysta Saacadda waxaan u wici karnaa si la mid ah sida aan uga yeelno iPhone. Marka lagu daro wicitaanada, waxaan sidoo kale ku wada xiriiri karnaa farriimaha qoraalka Sidoo kale.
Marka labaad waxaan leenahay muusikada. Thanks to ku darista LTE waxaan awoodi doonaa inaan adeegsanno, xilligan, ee Apple Music iyada oo aan loo isticmaalin iPhone-keena wax kasta. Xilligan la joogo iyo iyada oo aan war laga haynin, Spotify ma siin doonto suurtagalnimada ka dhigaysa mid la jaanqaadaysa qalabkan.
Marka saddexaadna, waanu soo dhawaynaynaa Siri ee Daawadeena. Ilaa hada, waxaan ubaahanahay iPhone si aan u awoodno inaan weydiisano Siri inuu noo dejiyo xusuusin, diro casuumaad ama amar kale. Wixii hada ka dambeeya, wax walba waan ka qaban karnaa Ilaalada iyada oo aan waxba ku xirnayn. Sida aan u aasaasi karno, waxaan ka heli karnaa ogeysiisyada codsiyada iyadoon loo baahnayn aaladdaada moobaylka.
Dhinacyada xun ee haysashada LTE
Sidii caadiga ahayd, wax walbaa wanaag ma noqon karaan. Qaabka cusub ee Apple wuxuu hayaa xoogaa xog ah oo aan gebi ahaanba dhiirrigelinayn in runtii la siiyo adeegsiga ay damacsan yihiin. Taasi waa, inkasta oo ay leedahay shaqooyin qaar oo ay tahay inay waxtar badan u yeeshaan dhammaan adeegsadayaasheeda, cawaaqibta ay imminka leeyihiin waxay adkeynayaan inay sii socdaan muddo dheer. Waxaan tixraacaynaa nolosha batteriga.
Mabda 'ahaan, waxaan ka bilownay taas inay nagu sii socon doonto 18 saacadood ka dib isticmaalka caadiga ah. Apple ayaa tilmaamaysa, qiyaastii, iyadoo la xakameynayo waqtiga (90 jeer), helitaanka ilaa 90 ogeysiisyo, 45 daqiiqo oo adeegsiga dalab ah iyo tababar ku saabsan 30 daqiiqo oo muusig lagu ciyaarayo.
Laakiin saacadahaani way yareeyaan, sida ay macquul tahay, maadaama aan wax badan la falgalno isaga, laakiin waxaan la yaabnay hoos u dhaca xad dhaafka ah.
Nolosha batteriga markaan nahay ku ciyaaraya codka waxaa loo xisaabiyaa kaliya horas 10, taas oo ah qadar caadi ah, marka loo eego aaladaha kale. Muddadan waa isku mid haddii aan ka hadalno tababarka gudaha. Halkii, waa la kala jari lahaa horas 5, haddii tababarku yahay bannaanka iyo iyada oo GPS firfircoon. Waxaa jira waxyaabo badan, haddii aan ku darno GPS-ka Isku xirka LTE, muddada lagu qiyaasay waa kaliya horas 4.
Hadday taasi u muuqato muddo aad u gaaban, markaan dhahno ka faa'iideysta Taxanaha Apple Watch 3 si aad u wacdo, tirooyinka ayaa walwal leh. Haddii aan haysanno Saacadda ku xiran iPhone, nolosha batteriga waxay noqon laheyd Saacadaha 3. Haddaan ka faa'iideysanno LTE si toos ah wacitaan laga bilaabo saacadda, qiyaasta muddada lagu hadlayo si joogto ah waa wax yar uun ka badan 1 saac.
Mid kale oo ka mid ah qodobada daciifka ah ee qaabkani waa iibkiisa. Ilaa maantadan la joogo, waxaanan rajaynaynaa inay tani hagaagto, sheyga laguma iibsan karo LTE dalal aad u tiro badan, oo ay ku jiraan Spain. Tani badanaa waxay sabab u tahay la'aanta heshiisyo lala galo shirkadaha bixiya isku xidhka LTE.
Shaki kuma jiro inay tahay a horumar laga gaadhay Apple in LTE laga hirgaliyo Apple Watch-kooda laakiin xaqiiqda ayaa ah in, maanta, waxqabadka iyo wax soo saarka aad heli karto ay yar yihiin. Ugu horayntii waxaa heshiis la aanta shirkado dalal kala duwan ka yimid, kaas oo xaddidaya dhibcaha iibka iyo marka labaad, by nolosha batteriga si yar oo ay soo bandhigto.
Marka la soo koobo, tiknoolajiyaddan cusub ee isku dhafan waxaa loo isticmaali doonaa hawlo gaar ah oo muddo aad u gaaban ah haddii aan dooneyno in Ilaaladda ay na qabato maalinta oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Muxuu Apple Watch Series 3 oo leh LTE dhab ahaantii noo keenayaa?
Waxa kale oo ku jira laambad safayr ah iyo kiiska dhoobada.
Jawaab Alonso Alejandro Zúñiga Beltrán
Kaliya qaybta hoose waa dhoobada, mid la xiriirta maqaarka. Kalluumeysiga safayr waxaa lagu heli karaa oo keliya nooca birta ah, ee ma ahan midka aluminium.
Aan aragno, maqaalkani asal ahaan wuxuu siinayaa macluumaad aan la xaqiijin oo toos uga baxa koofiyadda. Markaad dhahdo "waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah awoodooda keydinta" wax yar ayaad ka badantahay wax alifaad. Saacaddu kama duwana oo kaliya heerka qalabka, laakiin sidoo kale waxay leedahay processor 70% ka dhakhso badan taxanaha 2, waxaa sidoo kale ku jira W2 chip (oo kuu sheegaya waxa loogu talagalay), altimeter iyo barometer.
Markaad ka hadleyso nolosha batteriga, way cadahay in inta lagu jiro wicitaanka codka ay yaraan doonto ... laakiin Apple waxay ku sheegtay soo bandhigida in xaaladaha intiisa kale mudada ay noqon doonto isku mid sidii qaabkii hore, sidaa darteed dhammaan xogta aad ka siineyso nolosha batteriga waxay mar kale ka soo baxeysaa koofiyada. Markaad dhahdo lagama iibsan karo Spain, waa cusub oo gebi ahaanba BEEN. Waxaa si fiican looga iibsan karaa hadda Apple Store ee Spain.
Waxaan kaa codsanayaa, fadlan, waxba ha qorin maxaa yeelay waxaad caayaysaa kuweena fikirka ka qaba waxa aan dhahno.
Jawaab Pedro Amorós Torres
Hadda fadlan akhri maqaalka markale, garoow inaad isbarbar dhigayso Taxanaha 3 iyo Taxanaha 3 LTE, waxaadna dareentaa xoogaa xishood ah inaad qorto faallooyinka aad qortay oo aad ku eedeysay nuqul qoraa inuu qashin qoreyo markay tahay Waxa kaliya ee lagu qalmi karo sidan oo kale waa faalladaada.
Ciise Gaaban dijo
Hello Pedro, aniga oo ah qoraaga maqaalka waxaan sameynayaa sharaxaad ku saabsan faallooyinkaaga.
Marka ugu horeysa, waxaan arkaa inaad sifiican u garaneyso qeexitaanada Apple Watch, sida aan dhamaanteen wada leenahay, laakiin sidoo kale waa muhiim inaad si buuxda u aqriso maqaalka ka hor oo aad si sax ah hadhow uga faallooto.
Bilowgeeda, waxaa si cad loo sheegay in isbarbardhiga la sameeyay uu udhaxeeyo Apple Watch Series 3 oo leh LTE iyo LTE la'aan, marka kala duwanaanshaha qaabkeedii hore (Taxanaha 2) nama khuseeyo. Wax kasta oo aad tidhaahdo waa gebi ahaanba run laakiin annagu ulama jeedno.
Marka labaad, waxaan kugu martiqaadayaa inaad aqriso helitaanka Moodooyinka Taxanaha 3 ee leh LTE ee Spain oo noo sheeg haddii waxa aan ku dhahayo boostada ay run tahay iyo in kale.
Ugu dambayntiina, ka hor intaanan qorin boostada, aniga iyo asxaabteyda labadaba waxaan isku wargelinaynaa oo aan diiwaangelin ku filan si nuxurka maqaalku u dhameystirnaano sida ugu macquulsan.
Waad salaaman tihiin, ciise.
Ku jawaab JesúCorta
Hello Pedro, waa inaan eegno fahamkeena akhris. Tifatiraha ayaa cadeeyay inuu isbarbar dhigayo taxanaha 3 iyo taxanaha 3 LTE.
Waa inaad noqotaa ASS FOOL.
Waa maxay macnaha LTE. Mahadsanid
Jawaab Jorge Arancibia
LTE waxay u taagan tahay Evolution Long Term. Waa halbeeg isgaarsiineed oo moobiil ah oo ay soo saartay 3GPP, oo ah ururka soo saaray lana ilaaliyo GSM iyo UMTS.
Waxaan rabay inaan la tashado waxyaabaha soo socda: haddii aan iibsado taxanaha Apple Watch 3 (GPS + taleefanka gacanta), waxaa loo isticmaali karaa habka caadiga ah (taas oo ah, LTE la'aan iyo ku xirnaanta iPhone) haddii waddankeyga uusan jirin heshiis shirkadaha wali?
Haa, waa wax aad u wanaagsan in wax laga beddelo maqaalka ka dib oo dadka looga tago si xun.
Ku jawaab Copernicus
Ku jawaab Anastasio
WWW. SHAQAYNTA. COM
Adhigu waa qabow
Sida loo demiyo Aqoonsiga Taabashada iyo Aqoonsiga Wajiga ee iOS 11
Sideed sababood oo loo doonayo iPhone-ka cusub 8